Zvemagariro Midhiya: Nyika Yemikana Yemabhizimusi Madiki | Martech Zone
Muvhuro, Zvita 31, 2012 Muvhuro, Zvita 31, 2012 Lorraine Bhora
Makore gumi apfuura, sarudzo dzekushambadzira dzevaridzi vemabhizinesi madiki dzaive shoma. Chinyakare nhepfenyuro senge redhiyo, Tv uye kunyangwe mazhinji anodhinda kushambadza aingodhura chete kune bhizinesi diki.
Zvino ipapo kwakauya internet. Email kushambadzira, vezvenhau, mablog uye mazwi ekushambadzira zvinopa varidzi vemabhizinesi madiki mukana wekuburitsa meseji yavo. Kamwe kamwe, iwe unogona kugadzira kunyepedzera, kambani yako yaive yakakura zvikuru nerubatsiro rwewebsite hombe uye yakasimba purogiramu yemagariro enhau.
Asi makambani aya ari kushandisa sei zvishandiso izvi? Gore rega rega kubvira 2010, tanga tichingobvunza varidzi vemabhizinesi madiki mibvunzo kuti tinzwisise magariro enhau anokwana sei musanganiswa yavo yekutengesa.
Gore rega rega, iyo data inotsigira mamwe edu marefu akabata mafungiro uye anozunza zvimwe zvitendero kusvika pakati. Saka takagadzirira bvunza mibvunzo zvakare. Nepo zvimwe zvinhu zvaramba zvakadzikama, takaona shanduko sevaridzi vanoita kunge vari kushingaira, uye vachida kushandisa vezvenhau kune zvimwe ipapo kungoziva brand. Tinoda kuziva kana izvo zvatiri kuona kubva kune vatengi vedu zvakaenzanirana kune vakawanda vateereri.
Mukudzidza kwegore rapfuura, kunyangwe sevaridzi vaitora chinhanho, avhareji yenguva yakadyarwa munhau dzezvemagariro yakaramba ichidzikira zvishoma. Izvo zvakataurwa muchidzidzo chedu zvinoita sekuratidza kudzikira kwakaunzwa nemusanganiswa wemimwe michina yekugadzira uye nzira yakatarisa kune vezvenhau. Isu tinoda kuziva kuona kana izvi zvichizoenderera muna 2013.
Forbes uye zvimwe zvinyorwa zviri kuita fungidziro yekushandiswa kwemagariro enhau kumakambani akakura, tinoda kuziva zviri kuitika munharaunda yemabhizimusi madiki.
Ko Google+ inozopedzisira yawana nzvimbo patafura neFacebook, Twitter uye Linkedin? Gore rapfuura vanopfuura makumi mashanu muzana evatipindura vakati havana kumbopinda kuG +. Ini pachangu ndinofunga isu tichiri gore kure kubva kunetiweki iyi kubata chaiko, asi ini ndoda kuziva kuti data rinoti chii.
Ko Pinterest, Instagram uye mamwe emifananidzo akavakirwa masosi anokwana sei mune yakasanganiswa yemagariro? Gore rakapfuura ini ndaifara chaizvo nezve aya anokurumidza kukura mafoto saiti, asi kune chikamu chikuru, vatengi vangu vebhizinesi diki havana kunge vaine shungu yekupinda mukati.
Nekudaro, kana iwe uri wako kana uchishandira kambani ine isingasviki zana revashandi, tinoda kuziva zvaunofunga. Uri kushandisa sei vezvenhau sechikamu chekushambadzira kwako. Ndokumbira utore maminetsi mashoma kupindura iyo mibvunzo muongororo yedu. Tichave tichiunganidza data kuburikidza kupera kwaFebruary, tobva tagovana mhedzisiro mwaka uno
Tags: Marketingdiki bhizinesi rezvenhauevanhu vezvenhausocial media ongororo